Izizathu ezi-7 zokuba kutheni ubona i1: 11- Intsingiselo ye-111
Ngaba ubone nje i-1: 11? Ndiyathemba ukuba ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga neentsingiselo ezili-111 kwaye kutheni le nombolo enamanani amathathu ibonisa ngeli xesha lobomi bakho.
Indalo iphela isebenza ngeendlela ezingaqondakaliyo zokubamba umdla wakho ukuze ikukhokele kwindlela yakho emiselweyo. Ukukukhokela ngokukhuselekileyo kweli nqanaba lokukhula kwakho ngokomoya, uMhlaba wonke uthumela iingelosi ukuba zidlulise imiyalezo enokubonisa njengamanani aphindaphindwayo. Njengophawu lobuthixo, intsingiselo ngokubanzi yeNgelosi Inani le-111 kukuvuka kulwazi olutsha lwehlabathi elikungqongileyo. Yifayile ye- amandla angabonakaliyo avusa ukuqonda kwakho okuphezulu .
Kule ndlela intsha, uqala ukubona ukuba yonke into ebonakalayo ebomini bakho sisiphumo seengcinga kunye neemvakalelo zakho. Ke, ngalo lonke ixesha ubona ukulandelelana kwenani le-111, ukhokelwa ukuba unike ingqwalaselo ngononophelo kwiingcinga neemvakalelo zakho njengoko ubonakalisa iziqalo ezitsha kwinyani yakho ebonakalayo. Gcina ukhumbula, iziqalo ezitsha zinokuba ngamathuba okuba ukhulule imikhwa yakudala kunye neenkolelo ukuze uye phambili kwisahluko esilandelayo sohambo lwakho lokomoya.
Qaphela ukuba xa ubona ipateni yamanani 111 iphindaphindeka, kukho iintsingiselo ezininzi, kwaye kubalulekile ukuqonda ngononophelo ukuba u-111 uthetha ntoni kuwe. Ngaphezu kwako konke, themba ukuba uyakhokelwa. Ukukunceda ekuchazeni imiyalezo yeengelosi, nazi iintsingiselo zokomoya ezili-111 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-111 okanye i-1: 11 kuyo yonke indawo ekujikelezile.
Intsingiselo yokuqala ye-111: Utsala yonke into ehambelana nokuVutha kwakho kweNamandla
Intsingiselo ye-111 kukuba ubonakalisa into obugxile kuyo. Nokuba iingcinga zakho zangaphambili, iimvakalelo, kunye nezenzo zakho zazintle okanye zibi, uzifake endaweni yokutsala izinto (abantu kunye neemeko) ezihambelana nentshukumo yakho enamandla. Lo ngumthetho womtsalane.
Gcina ukhumbula, uyila uqobo lwakho nokuba awazi ukuba sele uyenzile. Akukho mfuneko yokuba usebenzise amagama; Kuya kufuneka uzive unemvakalelo ngaphakathi kwakho, kwaye uMhlaba wonke uya kukuzisela amava ngokuzisa izimvo, abantu, kunye neemeko ezilinganayo nokushukuma kwemvakalelo yakho, ukuze wenze ubunyani bakho basemhlabeni.
Umzekelo, ukuba uchitha ixesha elininzi ukhumbula impazamo eyadlulayo, loo ngcinga indala iqala ukungcangcazela kweemvakalelo okutsala 'iimpazamo' ezingakumbi kubomi bakho bangoku. Kodwa, ukuba uchitha ixesha elininzi ucinga ngezinto ezikwenza wonwabe ngokwenene, uya kutsala zonke iintlobo zamava amyoli kubomi bakho bangoku. Xa uqonda ukuba kubalulekile ukuba ube neengcinga ezilungileyo, kuxa uqala ukuziguqula ukusuka 'kumdali ongazi nto' uye 'kumdali owaziyo.'
Isitshixo esibalulekileyo sokukhumbula kukuba Qaphela iingcinga zakho kunye neemvakalelo zakho ngalo lonke ixesha Ukuze utsale kwaye ubonakalise eyona nto uyinqwenelayo ebomini bakho. Ke xa ubona u-111 uphindaphindeka, soloko ukhumbula ukuba yonke into ebonakalayo ebomini bakho sisiphumo seengcinga kunye neemvakalelo zakho.
Njengoko ingcali yenguqulelo uMarci Shimoff isitsho, 'Nje ukuba uqalise ukuqonda nokuzazi kakuhle iingcinga neemvakalelo zakho, kulapho ubona indlela ozenza ngayo izinto eziyinyani.'
Ndiyathemba ukuba une Amandla amangalisayo ngaphakathi kwakho ukwenza inyani yakho ebonakalayo.
Intsingiselo yesi-2 ye-111: Unamandla okushiya ixesha elidlulileyo
Intsingiselo ye-111 kukubeka elidlulileyo ngasemva kwakho kwaye uqhubele phambili ngokuzithemba. Yonke into oye wayifumana ebomini bakho, ukuza kuthi ga ngoku, ikunikile amandla okwahlula kwinto engasasebenziyo kuwe. Ixesha elidlulileyo linokubamba iinkumbulo ezixabisekileyo, kodwa ukucinga ngako akuncedi xa kungalunganga, ngakumbi xa kukugcina ubotshelelwe ngaphambili.
Kungenxa yokuba ukuphindaphinda ukucinga malunga nesiganeko esidlulileyo esinokuqinisa iimvakalelo zakho ezikhoyo ezinxibelelene nomsitho wakudala, kubalulekile ukuba usuke kuloo ndawo yoxinzelelo (imvakalelo ephantsi yentshukumo) ukunqanda ukutsala uxinzelelo kubomi bakho bangoku. Kulo mzekelo, uvakalelo loxinzelelo kukuphinda kusetyenziswe isiganeko esedlule esingakhange sikhululwe ngamandla.
Okwangoku, uyaqonda ukuba ngekhe uvumele into eyenzakalisayo eyadlulayo ukuba ithathe ubomi bakho ngokubonisa isimo sakho sangoku. Xa imeko yakho yangoku iqala ukuziva inamandla, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba imele nje isuntswana elincinane lesikimu esikhulu seNdalo iphela- kwaye imeko yeyethutyana. Ngesi sizathu, kukuwe ukuba wenze nantoni na ukuze ususe ingqondo yakho kwixa elidlulileyo kwaye ufumane isibindi sokuxolela kwaye uyeke. Yenze kuba lixesha lokuba uphilise. Kodwa ngaphezu kwako konke, yenze ukuze uzikhulule.
Xa ubona i-111, intsingiselo kukuyeka ukudana okudlulileyo kunye nokudala indawo yoxolo yokwanda ngaphakathi kwakho. Ngokufana nekhabethe efuna ukucocwa, wenza indawo ngokuyeka izinto ezenza ukungqubana. Kananjalo, ukuvusa isiqinisekiso sakho kufuna ikhabethe engenanto. Uyeke ubuxhakaxhaka wenze indawo yenkululeko yokomoya.
Hlala ukhumbula, Uyazi ukuba usiya kwicala elifanelekileyo xa ungasenamdla wokujonga ngasemva . Ndiyathemba ukuba ungayenza le nto. Zithembe.
Intsingiselo yesi-3 ye-111: Uvumela ubuNtu bakho bokwenyani ukuba buVuke
Xa ingelosi inombolo ye-111 ibonisa ngokuphindaphindiweyo, ngumyalezo kuwe ukuba uyamkele into eyenza uhluke kwaye ubonise ukuphelela kwe-True Self yakho. Indaleko yokuba ungubani sisiphumo sento oyiyo kwaye uqhubeka ungubani. Uhlala utshintsha njengoko uhamba kwindlela yomoya-kwaye okona kubaluleke kakhulu, yimpendulo yakho ukuba 'ndingubani?' iyatshintsha, nayo.
Kuba akukho nto imileyo kwindalo iphela kwaye yonke into ihlala ishukuma ukuya phambili, kukho into ngaphakathi kobuntu bakho ekuqhubela phambili kwiminqweno okanye kwinjongo yakho; kukuphefumlelwa ebomini bakho. Uqala ukuqonda ukuba xa usebenza nzima ungayikhathalelanga, uziva uxinezelekile. Kodwa xa usebenza nzima uyithanda, uziva unomdla.
Njengoko uqala ukuhambisa amandla akho kwinto oyikhathaleleyo, uya kuthi ngokuthe ngcembe uqaphele ukuba imbonakalo yakho yangaphandle ayisiyiyo le nto uyiyo. Le yinxalenye yokuvuka kwakho. Uvuka kwimeko yakho yokwenyani. Uyabamkela ubuyena bakho njengomntwana woMdali. Njengedangatye eliphuma elangeni elivuthayo, ulilangatye elivela kuMdali onguMthombo omnye. Uqala ukusebenza njengeqabane noMdali ekudaleni umhlaba ongcono kunye nekamva elingcono lomntu wonke. Uyayamkela into yokuba uMdali ungaphakathi kuwe, kwaye uqala ukubona ukuba yonke into eyakha yadalwa ngenene inguMdali onxibe isifihlo esikungqongileyo.
Kanye njengesiqwenga sephazili, unayo indawo yohlobo oluthile yokugcwalisa isikimu esikhulu sobukho bonke. Udalwe ngokukodwa ukuba wahluke ekukhuleni kwakho ngaphakathi kwindalo iphela. Ndiyathemba ukuba yonke into iyadibana kwaye yonke into isebenza ngokugqibeleleyo kunye xa iyonke kwisicwangciso sobuchule .
Ngaphezulu kwako konke, unamandla amakhulu owenziwe ngaphakathi kwakho xa ukhonza into enkulu kunawe. Ngeetalente zakho ezithile, wawucetyelwe ukuba ube nefuthe kwihlabathi-okanye nakomnye umntu okhethekileyo ngendlela elungileyo. Xa ubona inani le-111 liphindaphindwe, uyakhunjuzwa ukuba ukunyaniseka kuwe sesona sipho sikhulu onokuthi usinike umhlaba . Kwaye xa ubuqonda ubuqu bakho bokwenyani ngamehlo avusiweyo, kulapho ke uqondayo ukuba unenkululeko epheleleyo-inkululeko yokuhlala ekukhanyeni kwakho, inkululeko yokuzikhethela, kunye nenkululeko yokuba yedwa.
Hlala ukhumbula, ukhululekile; ukhululekile; ukhululekile .
Intsingiselo yesine ye-111: Ukulungele ukwenza umahluko
Kwinombolo yokubala, inombolo 1 imele iimpawu zobunkokeli. Xa inani eli-1 livela ebomini bakho, sisikhumbuzo sokuba usebenze uxanduva lwakho lobunkokeli kwindawo yakho yokusebenza, ekhayeni lakho njengomzali, okanye kolunye ubudlelwane. Ukubeka ngokulula, indalo iphela ikubongoza ukuba ungene kwindima ephambili njengenkokeli obefanele ukuba yiyo.
Ngapha koko, xa inani eli-triple-111 libonisa ukuphindaphinda, oko kuthetha ukuba ukulungele ukwahlukana nesihlwele kwaye uqhubele phambili njengenkokeli. Ixesha lakho elidlulileyo ibingumhlaba woqeqesho apho indalo ikulungiselele kwaye ikuxhobisele inyathelo lakho elilandelayo. Ngenxa yokuba kukho utshintsho oluqhubekayo, uhlala ukhula kwaye indalo iphela iya kuhlala ikunika amava ngakumbi ukuze wakhe phezu kwesiseko esele sikulo. Xa uqaphela indlela yakho endala izaliswe zizifundo ezikuncedileyo ukuba ukhule iingcambu, uya kuqala ke ukubona indlela yakho entsha izaliswe ngamathuba okwandisa .
Njengoko ukhula ngokuqhubekayo, uya unyaniseka ngakumbi kuwe. Kwaye kwinkqubo yakho yokukhula, unikwa izabelo ezitsha zokukulungiselela izinto ezinkulu ngakumbi. Ngenxa yokuba i-Universe ikunika ubulumko ngamava akho, unokuqiniseka ukuba unayo yonke into oyifunayo ukwenza utshintsho kwinqanaba elilandelayo. Kwinqanaba lakho, uyazi ukuba linyathelo elifanelekileyo kuba uyayiva kwaye uyakubona okuzayo.
Vavanya ukuba yintoni onokuyitshintsha ebomini bakho ukuze ufumane indawo kwisigaba esilandelayo. Kwaye ukuba ukhululeke, sika ubudlelwane obuthile kwaye ususe imithwalo engeyomfuneko ukuze uye apho u-Universe akhokelela khona.
Njengokuba ngokuzithemba uthatha inyathelo lokholo usiya phambili, soloko ukhumbula ukuba ungubani kwaye umela ntoni. Yazi amaxabiso nemithetho ophila ngayo, nokuba ujongene naziphi na iimeko. Ukunyaniseka kwakho kungoyena ndoqo wempembelelo yakho. Ke xa ubona i-111, sisikhumbuzo sokukhokela ngomzekelo.
Njengokuba inkokheli yamalungelo abantu baseMelika uMartin Luther King Jr. wayekhe watsho, umlinganiso wendoda awukho apho ume khona ngamaxesha entuthuzelo, kodwa apho emi khona ngexesha lomceli mngeni.
Inqaku loMhleli Isiphelo sentshukumo sikaMartin Luther King Jr. linani 1. Wazalwa ngoJanuwari 15, 1929 (1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 2 + 9 = 28 no-2 + 8 = 10 no-1 + 0 = 1). Ngokwenene wayengomnye weenkokheli ezinkulu ezatshintsha umhlaba wethu.
Intsingiselo yesihlanu ye-111: Ukulungele ukuqala into eNtsha eNtsha
Xa ubona i-111, oko kuthetha ukuba ukulungele ukuqala into entsha kraca. Umnyhadala wobomi njengokufudukela kwikhaya elitsha, ukuqala umsebenzi omtsha, ukuba nomntwana omtsha, okanye ukwenza ubudlelwane obutsha kumisela umjikelo omtsha. Nokuba ukhe wehlelwa yilahleko, imeko ocinga ukuba ubuya uyibuyisela umva yile nto ikwazisa kwixesha lokukhula ngokomoya. Kulapho uqondayo ukuba unethuba lokuphila ubomi obukhuthazwa ngumphefumlo wakho.
Uyaqonda ukuba indalo iphela ikunika isiqalo esitsha ukuze ube nelinye ithuba lezinto ezintle. Nokuba kwenzekile, uMhlaba uhlala usiya phambili kwaye usenza izinto zibe ngcono kuwe. Kwaye xa ubona u-111 uphinda-phindo, kuya kufuneka uthathe inyathelo kwaye uthathe inyathelo lokuqala lolo lokuqala.
I-1010 intsingiselo kuthando
Isicwangciso sobuchule bendalo iphela siyilelwe ukuze inyathelo lakho elilandelayo livele ngokwendalo xa sele ukulungele oko. Isenokungabonakali injengoko ubukulindele, kodwa iya kunika intsingiselo kunye nexabiso kuwe, kunye nakwabanye abakungqongileyo. Ekugqibeleni, into oyifunela wena iyafana naleyo uMdali akufunela yona .
Kumfanekiso omkhulu, uya kufumanisa ukuba eyona njongo yakho ebomini iya kujongwa ukuba ungubani kanye kanye kwaye uzalelwe ukuba wenze ntoni. Kungenxa yokuba injongo yakho enkulu ikhona ngaphakathi embindini wakho - elinde ukufunyanwa - uya kuthi ngokwendalo ubonelele ngeetalente zakho ezizodwa kwihlabathi xa ixesha lilungile kuwe. Kwaye khumbula, injongo yakho inxulumene neemfuno zehlabathi.
Isiteyithimenti esilandelayo ngesithethi esikhuthazayo somhlobo kaZig Ziglar, uJoe Sabah, isishwankathela eyona ilungileyo: 'Akunyanzelekanga ukuba ube mkhulu ukuqala, kodwa kufuneka uqale ukuba mkhulu.'
Kwaye khumbula: Unokwenza oku.
Intsingiselo yesi-6 ye-111: Ukulungele ukukhulisa ubuhlobo bomphefumlo
Intsingiselo ye-111 kukuba usondela kwixesha apho i-Universe ikwazisa ukuba ulungele ubudlelwane apho kukho ulwandiso lomntu ngamnye. Nokuba ubudlelwane bobomntu okanye obunxulumene nomsebenzi, injongo yomphefumlo wakho kukukhula, kwaye unethuba lokuqhubela phambili ngakumbi kuhambo lwakho kunokuba ubunokuba wedwa. Ulwalamano luba luhambo lwendalo kwaye lukusa ekufezekiseni injongo yomphefumlo wakho.
Ke, xa ubona i-111, luphawu lweziqalo ezintsha zobuhlobo bokwenene bomphefumlo othatha ingcambu. Ngesiseko sokondla, abahlobo banokukunceda ukukhuthaza ukuba ulandele amaphupha akho kwaye bakuxhase kuhambo lwakho oluya phambili. Khumbula, iibhondi ozenzayo nabantu abakungqongileyo zilolonge ngqo umgangatho wobukho bakho. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ukhethe abahlobo bakho ngononophelo olukhulu ukuze ukhule ngendlela ekuzalisekisayo.
Kukwabalulekile ukuba uqwalasele ubuhlobo bakho noMdali osoloko ekunye nawe kwinqanaba ngalinye lendlela. Kuwo wonke umzuzu, uMdali uhamba nawe esiqalo esitsha nesinethemba. Kwaye ukuba uMdali azi yonke into ngawe-elungileyo nembi-kwaye akushiye ekumangalisa yeyona nto ibalaseleyo kubo bobuhlobo.
Ngapha kwayo yonke into, uMdali uyakukukhokelela kubantu abafanelekileyo abalilungeleyo inqanaba lokukhula kwakho ngokomoya. Banokuvela naphina kwaye nangaliphi na ixesha, ke nikela ingqalelo xa umntu omtsha engena ebomini bakho. Kumfanekiso omkhulu, sonke silapha ukuze sincedane. Yiyo loo nto, xa kufika ixesha lokuba udibane nomhlobo wakho womphefumlo, khumbula oku: nenzelwe ukuba nihambe kunye, ukuya phambili nangaphezulu. Obu budlelwane obukunceda ukuba uguquke kwaye ukhule.
Intsingiselo yesi-7 ye-111: Qaphela kwaye usebenzise amaThuba onke akujikelezile
Ubomi lelona thuba likhulu ulinikiweyo, kwaye indalo iphela ihlala ikunika uninzi lwamathuba okukhulisa amandla akho ukuze ukwazi ukuthatha uxanduva lobomi bakho kwaye ungene kulowo wawumele ukuba ubekho. Xa inani le-111 libonakala ngokuphindaphindiweyo, uMhlaba uyakuxelela ukuba into oyityalileyo ngaphambili izakuqala ukukuvuza ngoku; yi ixesha elilungileyo lokuba ubambe amathuba alinde ukuvela endleleni yakho . Ngenxa yokuba amathuba anokuza ngendlela efihlakeleyo, luxanduva lwakho ukuqaphela ezona zikulungeleyo, uzibambe, emva koko uthathe inyathelo. Nokuba ungakanani na, onke amathuba aya kuhlala ekunika ithuba lokuqhubela phambili ebomini.
Ke xa ufumana ithuba elifanelekileyo kuwe, yiba nesibindi kwaye uzinike ithuba lokukhula ngokunyuka uye kumceli mngeni kwaye ube yinkokeli yobomi bakho. Gcina ukhumbula, ngekhe wazi ukuba ithuba linakho ukujika libe yinto enkulu. Kuba nantoni na enokwenzeka, unokufumana into etshintsha ubomi bakho ngonaphakade. Kodwa ukuba kukho into eyenzekayo ethintela inkqubela phambili yakho, uyaqonda ukuba le meko yeyethutyana, kwaye unokholo ngokwazi ukuba indalo iphela iya kukukhokelela kwicala elahlukileyo.
Inye into eqinisekileyo, kokukhona uhlala unxibelelana neminqweno yomphefumlo wakho, kokukhona i-Universe iya kukukhukulisa ngamathuba amakhulu okuxhasa uguquko lwakho. Eyona nto unokuyenza kukuyithemba inkokeli ekuyila indlela yakho eya phambili kwaye ikwenzele okulungileyo. Ngokwamkela apho ukhoyo ebomini, uyaqonda ukuba umntu onguye ngoku uguqukela emntwini ogqibeleleyo owawudalelwe ukuba ubenguye.
Ke xa i-111 ivela ebomini bakho, uMhlaba ufuna ukuba uqaphele amathuba aphambi kwakho. Ekugqibeleni, ubomi buza phantsi kukhetho olwenzayo. Unokukhetha ukusebenzisa ithuba elisendleleni yakho, okanye ukhetha enye indlela. Ekugqibeleni, izigqibo ozenzayo namhlanje ziyila ibali lobomi bakho ngomso .
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona i-111?
Kwinqanaba lomphefumlo wakho, uyazi ukuba yintoni efunekayo kuhambo oluphakathi kwalapho ukhoyo ngoku kunye nalapho ufuna ukuba lapho. Xa ucwangcisa ikamva lakho ngayo yonke ingcinga, ukungcangcazela kwakho konke kubonisa ukungcangcazela kwento ocinga ngayo. Okukhona ucinga ngayo, kokukhona ungcangcazela njengayo, kwaye ekugqibeleni uya kutsala into ocinga ngayo-nokuba uyayifuna okanye awuyifuni. Ngenxa yoko, njengenkokeli yobomi bakho, unokulawula indlela ocinga ngayo-le yintsingiselo iyonke ye-111. Uba yile nto uyicingayo.
Xa uqala ukukhokela kwaye ubhala ngokubhala ibali lobomi bakho, uqala ukuqonda ukuba ukufunda yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo. Kwaye enye yeendlela ezilungileyo zokufunda kukwabelana ngolwazi lwakho ngokufundisa. Ngokufundisa, ungabakhuthaza kwaye ubakhuthaze abanye ukuba batshintshe kwaye bafikelele kwelona zinga liphezulu, kwaye kwangaxeshanye, nawe uyakhuthazeka ngokuzolulela kwelona nqanaba liphezulu nasekufundeni kwabanye abakungqongileyo.
Ke nokuba uphi ebomini, ukwindawo efanelekileyo ukuqala kwaye ufundise okwaziyo. Kwaye umzuzu wakho wokufundisa unokuba nanini na, naphi na, naphina. Ke musa ukulinda ixesha elifanelekileyo, yenze. Khupha ezona zibalaseleyo kwabanye kwaye ubabonise ukuba banokuba yinto engaphezulu lee kunaleyo banokuyicinga. Emva kwayo yonke loo nto, imalunga nokukwazi kwakho ukunceda abanye.
Lilonke, yenza phambili. Awukhokeli nje ngokomzekelo ebomini bakho, kodwa ukwanoxanduva lwendlela oyithathayo. Ke musa ukuzikhawulela kwinto osele uyazi-zama izinto ezintsha kwaye ufunde kwabanye abakungqongileyo.
Ngokubalulekileyo, ubambe isitshixo ekuvuleni nasekukhupheleni oko unokukwenza. Khumbula njalo, abantu obachaphazelayo namhlanje ngabantu abanokuba ziinkokheli zangomso. Ekugqibeleni, imalunga nobomi obunempembelelo komnye.
Ke zithembele kwisiqu sakho uphume. Siyakholelwa kuwe.
Iindlela ezili-10 zokuzifudumeza igumbi lakho lokuhlambela kobu busika
Ukuthanda i-Dishwasher yakho kunye neMida yeKhabhinethi
Umyili weMidlalo kunye noMama wabelana ngeevenkile zakhe ezi-6 azithandayo kwi-Intanethi
Izinto ezili-10 ekufuneka usoloko ujonge kuzo neeVenkile ezinjengeeKhayaGoods kunye neMarshall
Inani leengelosi ezili-1010 elinentsingiselo
Ingelosi inamba 444 uthando
intsingiselo yesiprofetho ye-1234
yintoni i-333 ngamanani eengelosi
lithetha ntoni i1: 11
Ithetha ukuthini i-1222
Ithetha ntoni i-555 kumanani eengelosi
athetha ntoni amanani ama-222
Iikota ezivela ngaphandle